Tayada sare ee SMD-80A Warshad Mashiinka Mashiinka Wareegta ah ee Double Wall Paper | Mashiinka Chengda
SMD-80A Mashiinka Mashiinka Labaad ee Wareegga ah
SMD-80A mashiinka jaakada koobabka warqadaha caqliga leh wuxuu qaataa nooca-furan, naqshadeynta kala-goysyada kala go'an, qalabka maareynta, qaabeynta dhidibka dhaadheer, si markaas ay si macquul ah ugu qeybin karaan shaqooyinka qeyb kasta.
Mashiinka oo dhan wuxuu qaataa saliida lagu buufiyo.
Nidaamka PLC wuxuu xakameynayaa dhammaan koobabka habka sameynta.
Adoo adeegsanaya nidaamka baaritaanka cillad-farsameedka iyo quudinta adeegga adeegga, waxqabadka lagu kalsoonaan karo ee mashiinkeenna waa la damaanad qaaday, sidaasna wuxuu ku bixinayaa hawlgal deg deg ah oo xasilloon.
Xawaaraha ugu badan wuxuu gaari karaa 100pcs / min, waana mid ku habboon soosaarka 8-44OZ koob jaakad sameysmaya oo si ballaaran loogu adeegsado koob caano-shaah ah, koob bun ah, koobabka laliska, baaquli noodle iyo wixii la mid ah.
Xawaare 80-100 kumbiyuutar / min
Cabirka koobka Ballaca Sare: 100mm (max)
Ballaca hoose: 80mm (max)
Dhererka: 140mm (max)
Soo saar 10KW, 380V / 220V, 60HZ / 50HZ
Miisaanka saafiga ah 3.0 TON
Dammaanad Tayo Farsamo
Qaybaha 1.Mechanical waxaa loo balan qaadayaa 3 sano, qeybaha korantada waxaa loo balan qaadayaa 1 sano.
Dhammaan qaybaha miiska sameynta way fududahay in la helo dayactir.
Dhammaan qaybaha ka hooseeya miiska sameynta waxaa lagu saliiday saliidda qubeyska. Saliida waa in lagu beddelaa 4-6 bilood kasta saliid cayiman.
Karti wax soo saar
Soosaarka wax soo saarka ilaa 39,000 koob halkii wareeg (8 saacadood), illaa 3.5 milyan oo koob bishiiba (3 wareeg);
2.Percentage of pass wuxuu ka sareeyaa 99% soosaarka caadiga;
Hawl wadeenka 3.One hawl wadeen ka qaadi karaa dhowr mashiin isla waqtigaas.
Hore: SMD-80B Mashiinka Bowl Warqadda
Xiga: Mashiinka daboolka PLM-60